आँचललाई चर्चा मात्र चाहिने ?
प्रकाशित : मङ्गलबार, असार १०, २०७६१६:४४
फिल्म । पछिल्लो समय एकपछि अर्को फिल्म मार्फत चर्चामा आउने गर्छिन् , आँचल शर्मा । तर , उनको करियरमा ति फिल्मले कतिको फाईदा पुगेको छ त ? यो भने सोचनीय विषय नै हो , भलै उनि चर्चामा रहन्छिन् । त्यसो त उनलाई फिल्मको लोकप्रियतालाई म्युजिक भिडियोमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप पनि नलाग्ने होइन ।
किनकी उनको फिल्मको लोकप्रियता भईरहदा भिडियोमा निरन्तरता नै हुन्छ । ‘नाइँ नभन्नु ल ४’ मार्फत फिल्मनगरीमा डेब्यु गरेकी आँचल गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘शत्रु गते’ र यस वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘दाल भात तरकारी’ ले चर्चा दिलायो । फिल्मकै प्रमोसनको क्रममा आँचल मोफसलमा पनि मज्जैले डुलिन ।
आँचलको चर्चा त भयो तर यसले उनको करियरमा के फाईदा गर्यो त ? प्रश्न तेर्सिन थालेको छ । उनको फितलो भूमिका र कमजोर अभिनय आरोप लाग्दै गर्दा आँचल भने आफु गुमनाम नहुन चाहेको बताउछिन् । ‘एउटा कलाकार चर्चामा रहनु पर्छ , काम गर्दै गएपछि प्रतिक्रिया सधै एकै किसिमको आउँदैन ।’
उनि अहिले दर्शकले जस्तो प्रतिक्रिया दिएपनि आफ्नो नाम आएकोमा खुशी देखिएकी छिन् । शत्रु गते र दाल भात तरकारीको गीतसंगीत मात्र बढेको लोकप्रियतालाइ आँचलले फिल्ममै प्रयोग गरे , कति राम्रो हुन्थ्यो होला होइन र ? तर , उनि म्युजिक भिडियोमै रमाईरहेकी छिन् ।
‘साहो’ मा प्रभासको डबल रोल ?
लुक्स नलुकाउने प्रियंका
यसकारण बनेन ‘तेरे नाम’ को सिक्वेल
बेलायतमा ‘कैदीको पत्र’